E-Mauritania: IGhazouani-Aziz, umlando wengxabano - JeuneAfrique.com - Thumela RELAY
Accueil » INQUBOMGOMO »EMauritania: IGhazouani-Aziz, umlando wengxabano - uJeuneAfrique.com
IMauritania: IGhazouani-Aziz, umlando wengxabano - iJeuneAfrique.com
UMongameli waseMauritania wamanje u-Mohamed Ould Ghazouani (kwesobunxele) nomanduleli wakhe uMohammed Ould Abdelaziz. © DR
Ngo-Novemba 28, u-Mohamed Ould Ghazouani ubesenezingxoxo noMohamed Ould Abdelaziz ngalo lolo suku, ohlangothini lweSuku lokuzimela e-Akjoujt. Kepha owayengumongameli wangaphambilini walengisa umcimbi.
Emavikini asanda kwedlula, laba "bazalwane" bobabili empeleni bahlanganyela emzabalazweni wethonya ngaphakathi I-UPR (iqembu elibusayo). Ngokusho kwemithombo yethu, ibingakaze ikhulume kusukela ngoNovemba 22.
Ngalelo langa, eNouakchott, ngemuva komkhuleko omkhulu wangoLwesihlanu, "u-Ghazouani" waya ekhaya lika "Aziz". Ngalesi sikhathi eside tête-à-tête (amahora amathathu), umongameli omusha ubuye waqinisekisa umngane wakhe isifiso sakhe sokuba "ngumphathi" we-UPR njengenhloko yezwe, ngakho-ke, iningi .
UMaurice Kamto uyenqaba i-anti-tank brigade